Ukuphunyuka ngempelasonto nezingane | Izindaba Zokuhamba
Ukuphunyuka ngempelasonto nezingane
Maria | | Izindlela zokuphunyuka, Ukuhamba nezingane
Isithombe | I-Pixabay
Izimpelasonto ziyithuba elihle lokubalekela nezingane. Akunandaba ukuthi isikhathi sonyaka sithini. Eqinisweni, awudingi ngisho nokuhamba ibanga elide noma ukwenza izindleko ezingeziwe ngoba eNhlonhlweni yase-Iberia sithola izinketho eziningi ezihlekisayo zokuphunyuka ngempelasonto nezingane.
Nazi ezinye izindawo ezihlukile kakhulu ongazivakashela ngesikhathi sokubaleka ngempelasonto nezingane. Ngabe uhamba nathi?
1 IDinópolis eTeruel
2 I-Oceanogràfic eValencia
3 Indlu kaRatoncito Pérez eMadrid
4 Ukushushuluza eGranada
AmaDinosaurs akhona futhi uTeruel wazi kahle. IDinópolis iyipaki eyingqopha-mlando eYurophu enikezelwe kuma-paleontology nama-dinosaurs, okusele kuwo izinsalela ezibalulekile kulesi sifundazwe sase-Aragonese.
Kusukela singene eDinópolis Teruel kubonakala sengathi sesithuthele eJurassic Park. Siqala ukuzidela kumontage "Travel in time", lapho ukuvakasha kwengqikimba kwenziwa kugcwele imiphumela ekhethekile ngama-dinosaurs e-animatronic anokwethusa okungajwayelekile.
Ngakolunye uhlangothi, iDinópolis nayo inePaleontological Museum ekhombisa izinsalela zokuqala, izifanekiselo, imidlalo kanye nokulalelwayo okuhlangene ukunikela ngohambo olwehlukile nge-paleontology. Kungenzeka futhi ukubuka ososayensi kanye nama-paleontologists basebenza.
Ukuvakashelwa eMnyuziyamu kuvamise ukuqondiswa futhi egumbini ngalinye bazochaza ngokuningiliziwe ngezimfihlo ezifihlwa yiDinópolis. Okuhle kakhulu ukuthi inezinto ezihehayo ezahlukahlukene nemisebenzi ezojabulisa izingane ezinjenge-T-Rex e-animated eyiqiniso noma uhambo oluya emsukeni wabantu.
Isithombe | I-Wikipedia
I-Oceanogràfic yeDolobha Lobuciko Nesayensi yaseValencia yi-aquarium enkulu kunazo zonke eYurophu, futhi imele imvelo yasolwandle esemqoka emhlabeni. Ngenxa yobukhulu nokuklama kwayo, kanye neqoqo layo elibalulekile lezinto eziphilayo, sibhekene ne-aquarium eyingqayizivele emhlabeni lapho, phakathi kwezinye izilwane, amahlengethwa, oshaka, izimvu zamanzi, amabhubesi olwandle noma izinhlobo ezinelukuluku njengama-belugas nama-walrus, izibonelo ezihlukile lokho kungabonakala ku-aquarium yaseSpain.
Isakhiwo ngasinye se-Oceanogràfic sikhonjwa ngezindawo zasemanzini ezilandelayo: iMedithera, amaxhaphozi, izilwandle ezipholile nezishisayo, izilwandle, i-Antarctic, i-Arctic, iziQhingi kanye noLwandle Olubomvu, ngaphezu kweDolphinarium.
Umqondo walesi sikhala esiyingqayizivele ngukuthi izivakashi e-Oceanográfic zifunde izici eziyinhloko zezitshalo zasolwandle nezilwane ezivela kumyalezo wokuhlonipha ukongiwa kwemvelo.
Indlu kaRatoncito Pérez eMadrid
Isithombe | Kulungile idayari
Inganekwane ye-Tooth Fairy isitshela ukuthi le igundane elithandekayo linakekela ukuqoqa amazinyo amancane obisi ezingane lapho ziwa ukuze zibashiye uhlamvu lwemali ngaphansi komcamelo.
U-El Ratoncito Pérez unomsuka wakhe emcabangweni wenkolo uLuis Coloma owasungula indaba negundane njengomlingisi ophambili wokuthoba iNkosi u-Alfonso XIII esemncane ngemuva kokulahlekelwa elinye lamazinyo akhe obisi. Ngokwenganekwane, igundane lalihlala esakhiweni esiku-Arenal Street eMadrid, eduze kwasePuerta del Sol futhi lisondele kakhulu ePalacio de Oriente.
Namuhla, esitezi sokuqala kunombolo 8 salo mgwaqo, yi-House-Museum yaseRatoncito Pérez engavakashelwa nsuku zonke ngaphandle kweSonto.
ISierra Nevada Ski neMountain Resort itholakala eSierra Nevada Natural Park, komasipala baseMonachil naseDílar futhi kuphela ngamakhilomitha angama-27 ukusuka edolobheni laseGranada. Yasungulwa ngo-1964 futhi inamakhilomitha angaba ngu-108 okushibilika kuwo asabalala ngaphezu kwemithambeka eyi-115 (16 oluhlaza okotshani, 40 okuluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu 50, omnyama omnyama). Inezinganono ezingama-350 zeqhwa lokuzenzela, izikole eziyishumi nanhlanu zawo wonke amazinga namasekhethi amabili eqhwa ewela izwe lonke phakathi kwezinye izinsizakalo.
ISierra Nevada iyisiteshi esiseningizimu kakhulu eYurophu futhi iphezulu kunazo zonke eSpain. Izinga leqhwa lalo, ukwelashwa okwehlukile kwemithambeka yalo nokunikezwa kwezokungcebeleka okuhambisanayo kuyizicelo ezinkulu zabashushuluza eqhweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ukuhamba nezingane » Ukuphunyuka ngempelasonto nezingane
Izindawo ezinhlanu zokuhamba wedwa
Iziphethu ezishisayo e-Ourense